Mamita maviri kubva kwauri: zvirevo, mhando, mavara uye nezvimwe | Zvazvino Zvinyorwa
Zvinogona kuti zita racho rinonzwika kwauri Mamita maviri kubva kwauri, asi kwete chaizvo sebhuku, asi sebhaisikopo. Munguva yayo (2019) yaive budiriro (kunyangwe iine kupokana maonero).
Nekudaro, iwe unogona kunge usiri kuziva kuti pane chairo bhuku iro bhaisikopo raive rakavakirwa pariri, uye kuti rinotaurira zvakawanda zvimwe kunyaya. Iwe unoda here kuti tikuudze nezvazvo?
1 Chii chatinoziva nezve iro bhuku A mamita maviri kubva kwauri
2 Zvinyorwa zvebhuku
3 Rudzii ibhuku iri maA mamita maviri kubva kwauri
4 Pfupiso yebhuku A mamita maviri kubva kwauri
5 Mavara kubva kuMamita maviri Kubva Kwauri
6 About Rachael Lippincott, munyori
Chii chatinoziva nezve iro bhuku A mamita maviri kubva kwauri
Mamita maviri kubva kwauri (Cloud ...
Bhuku Mamita maviri kubva kwauri akanyatsoshevedzwa mashanu tsoka dzakaparadzana. Muchokwadi, zita rayo rakachinja zvichienderana nekwakaburitswa. Semuenzaniso, kuItari iri "Mita kubva kwauri." Uye mune dzimwe nzvimbo ivo vakanyatso chinja zita racho kana rashandurwa muchiSpanish.
Iyo yevechidiki inoverengeka angangoita mazana mana mapeji, kunyangwe zvichienderana nemuparidzi, uye iyo edition yaunosarudza, iyi nhamba ichawedzera kana kuderera. Nekuda kwekugadziriswa kweiyo bhaisikopo, bhuku racho rakabuditswazve, saka une shanduro mbiri: yekutanga rovhesheni uye iyo firimu inoenderana.
Tinofanira kuva pedyo nevanhu vatinoda zvakada kufanana nemhepo yatinofema.
Stella Grant anofarira kuve mukutonga, kunyangwe asiri kugona kudzora mapapu ake, ayo ave naye muchipatara nguva zhinji yehupenyu hwake. Pamusoro pazvose, Stella anoda kudzora nzvimbo yake kuti agare kure nechero munhu kana chero chinhu chingamupa hutachiona uye kukanganisa mapapu ake. Mamita maviri kure. Pasina kunze.
Kana ari Will Newman, chinhu chega chaanoda kudzora ndechekuti abude sei muchipatara ichi. Ivo havana hanya nemarapirwo avo, kana kana paine mushonga mutsva mukiriniki kutongwa. Achava negumi nemasere munguva pfupi uye achakwanisa kudambura michina yese iyi. Iwe unoda kuenda kunoona nyika, kwete chete zvipatara zvako.
Kuda naStella havagone kusvika padhuze. Kungofema padhuze, Kuda kunogona kukonzera Stella kurasikirwa nenzvimbo yake pane runyorwa rwekutamisa. Nzira chete yekuramba uri mupenyu kugara kure.
Unogona here kuda mumwe munhu wausingagone kubata?
Rudzii ibhuku iri maA mamita maviri kubva kwauri
Runyorwa rwemhando yeA maviri metres kubva kwauri inogona kuita mutambo. Nekudaro, iyo yaizosanganisirwa mukati memanyorero evechidiki (kana wechidiki mudiki, kana Nyowani Mukuru) nekuti mavara anokodzera mazera erudzi urwu rweruzivo.
Naizvozvo, tinogona kutaura kuti inyaya yevechidiki asi ine chinoshamisa maseru nekuda kwenyaya yainotaura.
Pfupiso yebhuku A mamita maviri kubva kwauri
Paunoverenga chirevo cheA mamita maviri kubva kwauri, hazvidzivirirwe kufunga nezvenhoroondo iri pasi peNyeredzi Nyeredzi, sezvo mavara, pamwe nechirongwa, zvakafanana.
Mamita maviri kubva kwauri anotiudza nyaya yevakomana vaviri vari kurwara. Mumwe wavo anoda kurwira kuti arapwe nekukurumidza sezvazvinogona; nepo mumwe wacho akakanda mumucheka uye chaanoda chete kusiiwa ari oga. Kana vaviri vakasangana, ivo vanoona mune imwe pfungwa dzakasiyana dzinovaita kuti vafungisise hupenyu hwavo, havazive kana vachiita nemazvo kana kwete.
Asi vane dambudziko, ndizvozvo vakomana vaviri havagone kusvika nekuti, kana musikana akarwara, haazokwanise kusarudza kupinzirwa mapapu izvo zvinogona kumuponesa.
Mavara kubva kuMamita maviri Kubva Kwauri
Kunyangwe paine chokwadi chekuti vatambi vazhinji vanoonekwa mubhuku maMeteri maviri Awakabva Kwauri, ivo vanopokana vanopokana vanongova vaviri. Uye ndosaka tichizokuudza nezvavo.
Iye ndiye musikana akapedza hwakawanda hwoupenyu hwake achirwara nekuda kwemapapu ake. Saka anga achienda nekudzoka kuzvipatara uye, kumubatsira kuramba achienda uye kwete kuenda pasi, gadzira Youtube chiteshi kurodha mavhidhiyo nezve kufambira mberi kwako, yemishonga yavanoyedza, nezvimwe.
Ari kudzora kwazvo, kunze kwemuviri wake, nekuti haakwanise kukunda chirwere ichi. Zvisinei, zvakakosha kwaari kuti achengetedze kutonga kwezvose zvakamupoteredza sezvo, kana mumwe munhu akasvika kwaari, anokwanisa kutapurira utachiona, uye izvo zvinogona kukanganisa mukana waanowana wekuiswa kwemapapu.
Kuda ndiko kwakapesana kwakakwana naStella. Mukomana ane chiroto chete kubuda muchipatara. Zvaave kuda kusvitsa makore gumi nemasere, chaanoda chete kubviswa pamachina uye kukanganwa nezvake, kuyedza kurapwa kana kutsvaga mushonga wechirwere chake (chiri kumuuraya).
haachazotsvagi kurwisa kurwara kwake, akazvigamuchira, pamwe nehunhu hwake, uye chaari kuda kurarama nguva yaanenge asara murunyararo. Hukama hwakashata nevabereki vake hunomuita mukomana asocial, nekuti haana shamwari, uye haana kuvhurika kwavari. Kusvika asangana naStella ndokudanana naye, hongu.
Pakati pevanhu vaviri, ndiye waunozoona achinyanya kushanduka, nekuti zvishoma nezvishoma iye anoziva kuti zvinhu zvinogona kunge zvisiri sezvaakatenda, uye anotanga kukwidza kusahadzika, kuve nehope dzine chekuita naStella.
About Rachael Lippincott, munyori
Munyori weA Two Metres Kubva Kwauri munyori Rachael Lippincott. Iye akazvarwa mu1994 muPhiladelphia uye hupenyu hwake hwakapedzwa muBucks Nyika. Akadzidza degree rekurapa kuUniversity yePittsburgh, kana ndizvo zvaaida nekuti akazoregedza achidzidzira Chirungu Kunyora.
Semudzidzi wepayunivhesiti, akanyoresa mumakirasi ekunyora muJuvenile Literature akadzidziswa naSiobhan Vivian, uye ndizvo zvakamukurudzira kunyora bhuku rake rekutanga, A dos metros de ti, que Yakabudiswa muna 2018 uye ikava mutengesi wepasi rose. Yakanga yakabudirira zvekuti gore rakatevera paive nekugadziridzwa kwemafirimu, ane nyeredzi dzaive Cole Sprouse naHaley Lu Richardson.
Parizvino anogara muPittsburgh kwaanomhanyisa rori yechikafu nemumwe wake. Parizvino hapana imwe nhoroondo yakaburitswa, asi tinoziva kuti pane imwe Nyowani nyowani nemunyori, yaGumiguru 6, 2020, yakanzi "Yese Iyi Nguva" (kunyangwe kuburitswa kwayo kunogona kunonoka).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Mamita maviri kubva kwauri